काम गुमेपनि राज्यबाट पाउने बेरोजगारी विमाका लागि योग्य हुनुभएन ? नआत्तिकन यसो गर्नुहोस् « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas
यदि तपाईले कोरोनाको महामारीका कारण काम गुमाउनुभएको छ भने संघीय सरकारबाट पाउने हप्ताको ६ सयसहित वेरोजगारी रकम प्राप्त गर्नुहुनेछ । तर तपाई त्यो रकम कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेबारेमा अन्यौलग्रस्त हुनुहुन्छ भने तपाई ठीक ठाउँमा आउनुभएको छ ।
हामीले तपाईका केही परिदृश्यसहित तपाईले चाल्नुपर्ने कदमबारे जानकारी दिदैछौं । तपाईले उक्त रकम चाल्नुपर्ने कदम तपाईको अवस्थाका आधारमा भरपर्छ ।
पहिलो, यदि तपाईको पहिलेदेखि नै बेरोजगारी बिमाबाट रकम पाउन स्वीकृत भइसक्नुभएको छ भने तपाईले केही पनि गर्नुपर्दैन । तपाईले राज्यबाट प्राप्त बेरोजगारीविमाका साथसाथै अप्रिल ५ पछि जुलाई ३१ सम्म हरेक हप्ता थप ६ सय डलर प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
यदि तपाईले कोरोनाको महामारीका कारण भर्खरै काम गुमाउनुभएको हो र तपाई नियमित वेरोजगारी विमाबाट पाउने रकमका लागि योग्य हुनुहुन्छ भने अनलाइनमा गएर आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । आवेदन दिएपछि तपाई योग्य हुनुभयो भने तपाईले वेरोजगारीविमाबाट पाउने रकम प्राप्त गर्नुहुनेछ । साथसाथै अप्रिल ५ पछि जुलाई ३१ सम्म हरेक हप्ता थप ६ सय डलर प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
न्युयोर्कमा बेरोजगारी विमा फाइल गर्नका लागि यो वेवसाइटमा जानुहोस् ।
तर तपाई सेल्फ इम्प्लोयड हुनुहुन्छ वा पार्ट टाइम कामदार हुनुहुन्छ र परम्परागतरुपमा राज्यबाट पाउने वेरोजगारी विमा आवेदनका लागि योग्य हुनुहुन्न भनेपनि तपाईले राज्यकै वेवसाइटमा गएर अन्य सरह वेरोजगारी विमाका लागि आवेदन दिनुपर्छ । यदि तपाईको आवेदन स्वीकृत भयो भने तपाईले केही गर्नुपर्दैन । वेरोजगारी विमाबाट आउने रकमका साथसाथै हप्ताको ६ सय पनि पाउनुहुनेछ ।
तर यदि तपाईको आवेदन अस्वीकृत भयो भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस् । तपाईले पेन्डेमिक अनइम्प्लोयमेन्ट एसिस्टेन्ट पीयुएका लागि आवेदन दिनसक्नुहुनेछ । त्यसका लागि योग्य भइसकेपछि तपाईले हरेक हप्ता पेन्डेमिक अनइम्प्लोयमेन्ट एसिस्टेन्टबाट रकम पाउनुहुनेछ । र, साथसाथै संघीय सरकारले दिने हप्ताको ६ सय पनि पाउनुहुनेछ ।
यदि तपाई राज्यबाट प्राप्त हुने परम्परागत बेरोजगारी विमा फाइल गर्नका लागि योग्य हुनुभएन वा तपाईको आवेदन अस्वीकृत भयो भने यो वेवसाइटमा जानुहोला ।
माथि उल्लेखित वेवसाइटमा गएर योग्यता चेक गर्नुभयो ? अब यहाँ क्लिक गरेर आवेदन दिनुहोस् ।
तपाईले एकाउन्ट ‘लग इन’ गरेपछि वेरोजगारी विमाका लागि आवेदन दिनुहोला । त्यसपछि तपाईले अनलाइन फर्म सेक्सनमा गएर ‘गो टु माइ अनलाइन फर्म’ मा क्लिक गर्नुहोला । त्यसपछि तपाईले ‘पीयुए एप्लीकेशन’ लेखेको सेक्सन भेटाउनुहुनेछ । त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला । तपाईले त्यहाँ ‘पीयुए आवेदन’ दिनसक्नुहुनेछ । तर तपाई नियमित वेरोजगारी विमाका लागि योग्य भएमा नियमित वेरोजगारी विमाबाटै रकम पाउनुहुनेछ । त्यसका लागि अयोग्य भएमा पीयुएबाट रकम पाउनुहुनेछ । त्यसका अतिरिक्त साताको ६ सय पनि पाउनुहुनेछ ।
यदि तपाईले कोरोनाको महामारीसुरु नहुँदै नै लिइरहेको बेरोजगारी विमाको जुलाई ३१ अगाडि नै ३९ हप्ता (न्युयोर्कको सन्दर्भमा) पुग्दैछ भने पनि नआत्तिनुहोस् । तपाईले राज्यकै बेरोजगारी विमा रकम दावी गर्ने वेवसाइटमा रहेको आफ्नो अनलाइन एकाउन्टमा गएर आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । तपाईले थप १३ हप्ताका लागि बेरोजगारी विमाबाट रकम पाउनुहुनेछ साथसाथै संघीय सरकारले दिने हप्ताको ६ सय पनि जुलाई ३१ सम्म पाउनुहुनेछ ।
सेल्फ इम्प्लोयडले कसरी फाइल गर्ने यहाँ हेर्नुहोस् हरेक स्टेप
यदि तपाईलाई आवेदन पेश गर्ने बेलामा फोन गर्न सुझाव दिइएको छैन भने फोन नगर्नुहोला । किनभने धेरैले फोन गरिरहेका कारण फोनलाइन निकै व्यस्त रहेको छ । याद गर्नुहोस्, तपाईले बेरोजगारी विमाका लागि फाइल गरिसकेपछि हरेक हप्ता अनलाइन एकाउन्टमा गएर आफू यो हप्तापनि वेरोजगार रहेको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
यदि तपाई आफ्नो राज्यबाट कसरी फाइल गर्ने भन्नेबारेमा अन्यौलमा हुनुहुन्छ भने यो वेवसाइटमा क्लिक गरेर आफ्नो राज्य छनौट गर्नुहोस् । तपाईले थप विवरणहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
श्रोत : डिपार्टमेन्ट अफ लेबर